विभिन्न विधामा पत्रकारहरु सम्मानित हुँदै
२०७३ भदौ २७ सोमबार, काठमाडौ । देशभरका स्वतन्त्र युवा र युवाका क्षेत्रमा काम गर्ने देशभरका गैर सरकारी संघसंस्थाकाे छाता सगंठन नेपाल स्वतन्त्र युवा संघले यस वर्ष पनि विभिन्न पत्रकारहरूलाई सम्मान गर्ने भएको छ । समाजमा पत्रकारिताको माध्यमबाट योगदान पु¥याएका पत्रकारहरूलाई सम्मान गर्दै आएको संघले मंगलबार राजधानीको जमल स्थित राष्ट्रिय नाचघरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सम्मान गर्न लागेको हो । कार्यक्रमको सर्वाेच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीस कल्याण ... बाँकी अंश»
विद्यार्थी संगठनहरु किन पुगे बालुवाटार ?
२०७३ भदौ २७ सोमबार, काठमाडौं । विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरुले प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमण र समसामयिक विषय उल्लेख गर्र्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकषर्णण गराएका छन् । अनेरास्ववियु, नेविसंघ, अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी र मधेश विद्यार्थी फ्रन्ट लगायत ८ संगठनले सोमबार प्रधानममन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । नेविसंघ अध्यक्ष नैनसिंह महर, अनेरास्ववियु अध्यक्ष नविना लामासहित गएको प्रतिनिधि मण्डलले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा शिक्ष ... बाँकी अंश»
महाधिवेशनको विषयमा भ्रम नर्छन तरुण दलका पूर्व पदाधिकारीको आग्रह
२०७३ भदौ २७ सोमबार, काठमाण्डौ । नेपाल तरुण दलको चौथो महाधिवेशनको बारेमा सञ्चार माध्यम मार्फत भम्र फैलाईको भन्दै विधान समिती र केही सदस्यलाई पूर्व पदाधिकारीहरूले तदर्थवादको आरोप लगाएका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सञ्चार माध्यमबाट केन्द्रिय समिति र दलका अध्यक्ष उदय शम्शेर राणाले एकलौटि गरेको भन्ने विषयलाई लिएर नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको भन्दै विधान समितिका संयोजक मेदिनि सिटौला र अन्य केन्द्रिय सदस्यहरूले तदर्थवादको चरित्र दे ... बाँकी अंश»
२०७३ भदौ २७ सोमबार, काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल महिला सङ्घ स्थापनाको ६९ वर्षे इतिहासमा यही भदौ २९ गतेदेखि तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन हुँदैछ । सङ्घको महाधिवेशन ‘महिला सशक्तीकरणका चार निकास, समान सहभागिता, शान्ति, समृद्धि र संवैधानिक विकास’ भन्ने नाराका साथ भदौ २९ देखि ३१ गतेसम्म काठमाडौँमा हुँदैछ । विसं २००४ साउन २४ गते स्थापना भएको महिला सङ्घको हालसम्म २०५८ साल विराटनगरमा पहिलो र २०६४ साल काठमाडौँमा दोस्रो महाधिवेशन भएको थ ... बाँकी अंश»
प्रकाशशरणले दाहाल र मोदीको भेट शुक्रबार हुने पक्का गरे
२०७३ भदौ २७ सोमबार, काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतको भ्रमणपछि मात्रै भारतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आसन्न भारत भ्रमणबारे औपचारिक जानकारी गराएको छ । महतले प्रधानमन्त्री दाहालको समकक्षीसंगको भेटको तिथि पनि तय गरेका छन् । सोमबार भारतीय विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै औपचारिक जानकारी गराएको हो । सोमबार मात्रै परराष्ट्रमन्त्रीले समकक्षी सुष्मा स्वराजसंग भेटवार्ता गरेका थिए । भेट लगत्तै विदेश मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबारेको औप ... बाँकी अंश»
विद्यार्थी संगठनले भारत जान लागेका प्रधानमन्त्रीलाई के भने ? (विज्ञप्तिसहित)
२०७३ भदौ २७ सोमबार, काठमाडौं । भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र नेपाली जनताको हित विपरीत कुनै पनि सन्धि सम्झौता नगर्न विद्यार्थी संगठनहरुले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । विपक्षी एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको केन्द्रीय कार्यालय बागबजारमा बसेको संयुक्त विद्यार्थी संगठनको बैठकले महत्वपूर्ण आठ वटा निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र अहिले बजारमा भइरको नेपाली भाषाको बहसबारे पनि छलफल गरेको छ । यस्तै बैठकले निर्धारित समय ... बाँकी अंश»
उत्तर कोरियाको आणविक परीक्षणप्रति नेपाल सरकारको विरोध
२०७३ भदौ २७ सोमबार, काठमाडौँ। जनगणतन्त्र कोरियाले हालै गरेको आणविक परीक्षणका सन्दर्भमा नेपाल सरकारले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद् तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अवज्ञा गर्दै कोरियाले गरेको उक्त परीक्षणप्रति विरोध जनाएको हो । सबै किसिमका आमविनाशकारी हतियारको पूर्ण निशस्त्रीकरणमा नेपालले लिएको स्थिर नीतिअनुसार त्यस्ताखाले परीक्षणको विरुद् ... बाँकी अंश»
धन्दा गराउने होटल सञ्चालक पक्राउ
२०७३ भदौ २७ सोमबार, इटहरी । एक किशोरीलाई जबर्जस्ती भारतीय नागरिकसँग यौन सम्पर्कमा लगाउन खोज्ने इटहरी–१ का लुम्बिनी होटलका सञ्चालक रामजी खत्री आइतबार अबेर पक्राउ परेका छन् । होटल सञ्चालक खत्रीले चार जना भारतीय नागरिकसँग प्रतिव्यक्ति पाँच हजारका दरले रु २० हजार लिई उनीहरुले नै लिएर आएको सवारीसाधनसँगै किशोरीलाई खत्री आफैँले मोटरसाइकलमा भेडेटार लैजाँदै गर्दा पक्राउ परेको इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीले बताएको छ । होटल सञ्चालक खत्रीले डर धाकधम्की र प ... बाँकी अंश»
नेपाल एयरलाइन्सको विमानलाई आकस्मिक अवतरण
२०७३ भदौ २७ सोमबार, काठमाडौं । नेपाल एअरलाइन्सको एउटा विमान भारतको नयाँ दिल्लीस्थित इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आकस्मिक अवतरण गराइएको छ । आइतबार राति दिल्लीबाट काठमाडौंका लागि उडेको विमान करिब २५ मिनेटपछि दिल्लीमै आपतकालिन अवतरण गराइएको हो । आरए –२१८ विमानमा प्राविधिक समस्या देखिएपछि दिल्ली फर्काइएको स्रोतले जनाएको छ । विमानमा १ सय ६० जना सवार थिए । सकुशल आपतकालिन अवतरण भएको र कुनै मानवीय क्षति नभएको विमानस्थलका अधिकारीहरुलाई उ ... बाँकी अंश»
२०७३ भदौ २७ सोमबार, काठमाडौँ । पुरातत्व विभाग र काठमाडौँ महानगरपालिका बीच सहमति भएपछि रानीपोखरी पुनःनिर्माणको काम यसै सातादेखि हुने भएको छ । मापदण्ड विपरीत पुनःनिर्माणका काम भएको भन्दै पुरातत्व विभागले निर्माणको लागि जिम्मा पाएको कामपालाई गत १६ गतेदेखि निर्माणको काम रोक्न निर्देशन दिएको थियो । निर्माण भइसकेका संरचना सच्याउने र अब बनाउने संरचना पनि विभागले भनेअनुरुप बनाउने सहमति भएपछि यसै साताबाटै फेरि पुनःनिर्माणको काम सुरु हुने विभागका प्रवक् ... बाँकी अंश»
२०७३ भदौ २७ सोमबार, बागलुङ । बागलुङदेखि छिमेकी मुलुक भारतको नयाँ दिल्लीसम्म सिधा बस सेवा सुरु हुने भएको छ । आउँदो असोज ७ गते पहिलो बस यहाँबाट नयाँ दिल्लीका लागि प्रस्थान गर्नेछ । धौलागिरि अञ्चल यातायात बस व्यवसायी सञ्चालक समितिले पोखरामा रहेको मोर्डन ईरा टुर्स एन्ड ट्राभल्स प्रालिसँगको सहकार्यमा बस चलाउन लागेको हो । साताको आइतबार, बुधबार र शुक्रबार सेवा सुचारु हुने समितिले जनाएको छ । नयाँ दिल्लीबाट पनि सोही बार र समयमा बस बागलुङको लागि छुट्नेछ । ... बाँकी अंश»
२०७३ भदौ २६ आइतबार, काठमाडौँ । नेपाल तरुण दलको चौँथो राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी असोज ३ देखि ५ सम्म पोखरामा हुने भएको छ । दलले आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरी अध्यक्ष उदयशमशेर राणाले भदौ २१ र २२ गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णयअनुसार महाधिवेशन गर्न लागिएको जानकारी दिए । अध्यक्ष राणाले ५५ जिल्लाको जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भैसकेकाले बाँकी जिल्लाको भदौ मसान्तसम्म सकेर अधिवेशन सम्पन्न गर्न लागेको बताए । उनले भने , “अघिल्लो अधिवेशनमा ६५ ... बाँकी अंश»
निर्वाचनको मिति आयोगले तोक्न पाउनुपर्छ : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादव
२०७३ भदौ २६ आइतबार, काठमाडौँ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आयोग आन्तरिक र प्राविधिक हिसाबले तयार रहेको बताएका छन् । गाउँ विकास समिति, राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले ललितपुरमा गरेको ‘गाउँपालिका निर्धारण र स्थानीय निकायको निर्वाचनको अपरिहार्यता’ विषयको अन्तरसंवादमा उनले भने, ‘आयोग स्थानीय तहको सङ्ख्या तथा सीमा निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन र निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको पर्खाइमा छ ।’ निर्वाचनको मिति ... बाँकी अंश»
पत्रकार कुँईकेल एम्नेष्टी इन्टरनेशनलको अध्यक्षमा निर्वाचित
२०७३ भदौ २६ आइतबार, काठमाडौं । पत्रकार राजन कुँईकेल मानव अधिकारवादी संस्था ‘एम्नेष्टी इन्टरनेशनल’को अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । पोखराको लेकसाइडमा भएको एम्नेष्टीको २५औं राष्ट्रिय परिषद् बैठकबाट कुँईकेल अध्यक्ष निर्वाचित भएका हुन् । ईमेज च्यानलका समाचार सम्पादक समेत रहेका कुँईकेलले हाम्रा कुरासंग मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्न आफुलाई थप जिम्मेवारी थपिएको बताए । कुँईकेल यसअघि एम्नेष्टीको उप–महासचिव थिए । कुँईकेलसंग चुनावी प्रतिस्पर्धा ... बाँकी अंश»
केन्द्र यासोकमा राख्न माग गर्दे स्थानियवासीले घेरे जिविस
२०७३ भदौ २६ आइतबार, पाँचथर । जिल्लाको प्रस्तावित कुम्मायक पालिकाको केन्द्र यासोकलाई बनाउनुपर्ने माँग गर्दै आइतबार यासोकबासीले जिल्ला विकास समिति घेराउ गरेका छन् । विभिन्न प्लेकार्ड सहित सदरमुकाम पुगेका करीब अढाइ सय यासोकबासीले जिविस घेरेका हुन् । स्थानीय निकाय पुनर्संरचना जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिले आयोगलाई पठाएको पाँच स्थानीय तहको खाकामा प्रस्तावित कुम्मायक पालिकाको केन्द्र आङसराङको महेलबोटे तोकेको भन्दै यासोकबासी आन्दोलित बनेका हुन् । द्धन्दकाल ... बाँकी अंश»
काँग्रेसका २ सय ८० अगुवा कार्यकर्ता गाँउ–गाँउमा
२०७३ भदौ २६ आइतबार, स्याङ्जा । नेपाली काँग्रेस स्याङ्जाले पार्टी संगठनलाई मजवुद, गतिशील र जिवन्त बनाउन एक महिने जागरण अभियानको थालनी गरेको छ । काँग्रेस जिल्ला कार्य समिति स्याङ्जाको श्रावण १२ गते बसेको बैठकले सो निर्णय गरेपछि यसको थालनी हुन लागेको हो । आठ ओटा सन्देश लिएर २ सय ८० जना अगुवा कार्यकर्ताहरु गाँउ र वडामा खटाएको स्याङ्जाका पाटी सभापति तथा सांसद कमलप्रसाद पंगेनीले जानकारी दिए । पहिलो चरणमा स्याङ्जा काँग्रेसले तीन वटै क्षेत्रका अगुवा कार्यकर्ताहरुल ... बाँकी अंश»
भारतको ईशारामा संविधान संशोधन हुदैछ : अध्यक्ष न्यौपाने
२०७३ भदौ २६ आइतबार, काठमाडौं । चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपालले भारतको इशारामा संविधान संशोधन हुन लागेको आरोप लगाएको छ । कसैलाई खुसी बनाउनकै लागि संविधान संशोधन हुन विडम्बनापूर्ण रहेको सो पार्टीले जनाएको छ । रिपोर्टर्स क्लव नेपालमा आईतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर चुरेभावर पार्टीका अध्यक्ष बद्रीप्रसाद न्यौपानेले संविधान संशोधन गरेर मधेसी मोर्चाका अराजनीतिक माग कुनै पनि हालतमा पूरा गरिनु नहुने बताए । ‘कसैलाई खुसी पार्न भारतको इशारामा संविधान संशोधन हुन ... बाँकी अंश»